बागलुङमा सहायक निर्वाचन अधिकृत नै कांग्रेस कार्यकर्ता
Friday, 10 Nov, 2017 8:21 PM
बाग्लुङ, २५ कात्तिक– बाग्लुङमा जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको दवावमा सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा सामेल भएका भेषराज शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बागलुङमा स्थानीय निकाय अन्र्तगत कार्यरत भेषराज शर्मालाई राजनीतिक दवावका आधारमा सहायक निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको खुलेको हो । जिल्ला समन्वय समितिमा अधिकृतको रुपमा कार्यरत शर्मा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय छन् । शर्मालाई सहायक निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरेसँगै निर्वाचनमा सत्तापक्षले धाँधली गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।
उनलाई सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्दा निर्वाचनमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने विपक्षीले आशंका गरेका छन् । ‘जसले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जागिर खायो उसैलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ, यसबाट संस्थागत रुपमा निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्न’ एक विपक्षी नेताले भने ।
निर्वाचन आयोगले बागलुङ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रुपमा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डित र निर्वाचन अधिकृतमा न्याय क्षेत्रकै विद्याराज पौडेललाई नियुक्ती गरेको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नियुक्त गर्ने सहायक निर्वाचन अधिकृतमा राजनीतिक व्यक्तिको नियुक्तिले ठूलो आशंका उत्पन्न भएको दलहरुले वताएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शर्मालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धीत काम बाहेक आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने समेत जिम्मा दिइएको छ । ‘एउटा पार्टी निकट रहेको कर्मचारीले कसरी आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्न सक्ला ?, न्यायिक क्षेत्रबाट लिनुपर्ने पदमा राजनीतिक दवावका भरमा ल्याएर निर्वाचनमा अबाञ्छित गतिविधि हुने वातावरण सिर्जना हुँदैछ’ वाम गठबन्धनका एक नेताले बताए । शर्मासँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पुष्पराज दाहालललाई सहायक निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । दाहाल न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत भए पनि शर्मा न्याय क्षेत्र बाहिर रहेर नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन संघमा आवद्ध व्यक्ति हुन् ।
को हुन भेषराज शर्मा ?
२०४९ सालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसबाट जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका गोपाल सापकोटाको राजनैतिक निगाहामा बक्स भएका कर्मचारी हुन् भेषराज शर्मा । नेपाली कांग्रेसवाट टीका लाई नियुक्ती पाएका शर्मालाई आन्तरिक प्रक्रियाबाटै स्थानीय निकायको कर्मचारीमा स्थायी वनाइएको थियो । उनी जागिरमा प्रवेश गर्दा जुन प्रकारको राजनैतिक नियुक्ती प्रक्रियावाट गरियो त्यस्तो व्यक्तिले कसरी मर्यादित रुपमा चुनाव गराउना सक्ला भन्ने आम जनतामा प्रश्न खडा गरेको छ ।
पार्टीको सिफारिसमा जागिर खाएकालाई सहायक निर्वाचन अधिकृत बनाउनु पदीय हिसावले अयोग्य मानिन्छ । निर्वाचन आयोगका सचिव डेगेन्द्र पौडेलको ठाडो आदेशमा नियुक्ती भएको स्रोतले जनाएको छ । भेषराज शर्मा नगेन्द्र पौडलका आफन्त समेत हुन् । भेषराज शर्मा नेपाली कांगे्रस निकट कर्मचारी संघमा आवद्ध छन् ।
के अधिकार हुन्छ सहायक निर्वाचन अधिकृतको ?
सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने र मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतलाई र अन्य कर्मचारी खटनपटन गर्नेसम्मको अधिकार हुन्छ भने भेषराज शर्मालाई त झन समग्र जिल्लाको आचारसंहिताको समेत मुल्याङकन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाशप्रसाद पण्डितले जिल्ला समन्वय समितिको आग्रहमा शर्मालाई सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको वताए । जिल्ला समन्वय समिति मातहतका अन्य कुनै कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी जिम्मेवारी नदिइने र त्यसको साटो भेषराज शर्मालाई सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने सहमति भएको उनको भनाई थियो ।